क्रोकपॉट गौलाश (स्लो कुकर अमेरिकन चोप सुए) - व्यंजनहरु
20 को लागी टेकोसको लागि कति ग्राउड गोमांस
गार्निशका लागि कसरी चकलेट कर्लहरू बनाउने
fajita मासु के गर्ने
Easy Crockpot Gaulash व्यस्त परिवारका लागि उत्तम मेक अगाडिको खाना हो! यो हार्दिक, स्वादिष्ट र सही आरामदायक खानाको साथसाथै सेवा गरिन्छ सजिलो घरेलु छाछ बिस्कुट !
अमेरिकी Gaulash (संग भ्रमित हुन छैन हंगेरी Goulash ) टमाटरमा आधारित ब्रोथमा ग्राउड गोमांस, प्याज, च्याउ र पास्ता स्मोथरेर बनेको छ। यो सजिलो क्रोकपट गौलाश समय भन्दा पहिले बनाउन सजिलो छ र सबैजनाले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रेम गर्दछन्।
Easy Crockpot Gaulash
पुरानो शैलीको गोलाश एउटा कचौरामा पूरा खाना हो जुन तपाईंको परिवारलाई सन्तुष्ट राख्दछ र उनीहरूको पेटलाई खुसी पार्दछ। यो संग सेवा ताजा रोल र एक साइड सलाद यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने। तपाईंको परिवारले स्वाद एकदम मनपर्दछ र तपाईं सरलता मनपर्नुहुनेछ!
के गोहीको मासु स्यान्डविचको साथ जान्छ
गौलाश भनेको के हो?
जबकि हंगेरी Goulash एक पेपरिका अनुभवी मासु स्टू / सूप, एक हो अमेरिकी गौलाश पूरै फरक डिश हो।
उत्तर अमेरिकामा गाईको गोलाश बनाउने विधि प्राय: टमाटरमा आधारित ग्राउन्ड गोमांस र मकरोनी डिश हो। अन्य तरकारीहरू स्वादका लागि प्याज र हरियो मिर्च जस्ता थपिन्छन्। यो पकवान अन्य धेरै नामहरू द्वारा जान्छ (जस्तै अमेरिकन चोप सुए) तर हाम्रो परिवारले यसलाई सँधै बोलाउँदछ गाई गोउश !
के butternut स्क्वाश सूप संग के सेवा गर्ने
के तपाईं गोलाशलाई क्रोकपटमा बनाउन सक्नुहुन्छ?
जबकि प्राय Gaulash रेसिपीहरू स्टोलोटपमा बनाइन्छ, यस डिशलाई ढिलो कुकरमा उमाल्न अनुमति दिँदै यो अगाडिको खाना बनाइन्छ। यो समय भन्दा पहिले मात्र बनाउन सकिन्छ, स्वादहरू यति राम्रो हुन्छ कि दिनभरि ढिलो कुकरमा पकाउँदा! घर आउने उत्तम पकवान।
सुविधाजनक: केवल सामग्रीहरू राख्नुहोस् र ढिलो कुकरले सबै काम गर्न दिनुहोस्।
सुगन्धित: जसो मासुको चटनीले यो Goulash रेसिपीको लागि दिनभरि पकाउँदछ, यसको स्वाद धेरै छ।
अगाडि बढाउनुहोस्: यो समय भन्दा अगाडि नै बनाउन सकिन्छ यसको मतलब तपाईं खाना खानको लागि खाना खान आउनुहोस्।
कसरी क्रोकपटमा पुरानो शैलीको Goulash बनाउने
क्रोकपॉट गौलाश बनाउने एकदम सरल छ!
खैरो मैदान गोमांस, प्याज र लसुन।
सबै सामग्रीहरू (नूडल्स बाहेक) थप्नुहोस्, हलचल, कभर र २ घण्टाको लागि कममा वा -5- hours घण्टाको लागि कममा पकाउनुहोस्।
तपाईंको चाउचाउहरू तयार गर्नुहोस् (यो पनि समय भन्दा अघि गर्न सकिन्छ र फ्रिजमा राखिन्छ), त्यसपछि तातो हुनको लागि करीव -10-१० मिनेटको लागि ढिलो कुकरमा थप्नुहोस्।
जब तपाई क्रकपटमा कच्चा चाउचाहरू अन्तिम -०-40० मिनेट सम्म थप्न सक्नुहुनेछ, उत्तम नतीजाहरूको लागि, म पक्षमा नूडल्स पकाउने र उनीहरूको सेवाको लागि तयार पार्न सिफारिस गर्दछु। मैले फेला पारे कि, ब्रान्डमा निर्भर गर्दै, कच्चा चाउचा थप्दा बनावटमा गम्मी हुन सक्छ। सबै भन्दा राम्रो र सब भन्दा संगत परिणामहरू पास्ता छुट्टि पकाएर हासिल गरिएको थियो।
प्रेशर कुकर म्याक र क्रीम चीजको साथ चीज
तापक्रम घट्ने बित्तिकै स्ट्युज, चिली र सूप ग्रीष्मकालीन बारबेक्यूड भाँसाहरूबाट स्वागत गरिएको परिवर्तन हो। क्रोकपट Gaulash उत्तम सान्त्वना खाना खाना छ कि तपाईं यो कोर आफ्नो कोरमा तपाईं न्यानो हुनेछ। सजिलैसँग बनाउन र समान रूपमा स्वादिलो, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्दछ!
अधिक क्रोकपट रेसिपीहरू तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ!
क्रोकपट चिकन र चामल - उत्तम हप्ताको भोजन!
स्लो कुकर चिकन पॉट पाई सूप
स्लो कुकर चिकन एन्चिलाडा सूप
CrockPot Lasagna सूप - यो गिरावट तपाईं न्यानो हुनेछ!
तयारी समय० मिनेट कुक समयदुई घण्टा कुल समयदुई घण्टा ० मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन यो क्रोकपट गौलाश रेसिपीमा टेन्डर पास्ता नूडल्स एक धनी गोमांस मासु सॉसमा मिश्रित छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई पाउन्ड जमिनको मासु
▢१ ½ मध्यम प्याज पासा
▢3 लौंग लसुन कीमा
▢१ हरियो खोर्सानी पासा
▢6 औन्स गोलभेडा अचार
▢½ कप पानी
▢24 औन्स पास्ता सॉस jarred वा डिब्बाबंद
▢२ औन्स पासा टमाटर डिब्बाबंद, ढल निकाल्ने छैन
▢दुई चम्मच वोर्स्टरशायर सस
▢। औन्स च्याउ डिब्बाबंद, ढल निकाल्ने छैन
▢१ चम्चा इटालियन मसाला
▢½ चम्मच मसाला नुन वा स्वाद गर्न
▢3 कप पास्ता शेलहरू नपकाइएको
खैरो मैदान गोमांस, प्याज र लसुन जबसम्म कुनै गुलाबी रहँदैन। कुनै बोसो निकाल्नुहोस्।
CrockPot मा ग्राउड गोमांस मिश्रण थप्नुहोस्। पकाएको शेल्फहरू बाहेक सबै बाँकी सामग्रीहरू थप्नुहोस्।
२ घण्टा उच्च मा कुक गर्नुहोस् वा -5- hours घण्टाको लागि कम।
प्याकेज दिशाहरू अनुसार शेलहरू अल डेन्टेटहरू तैयार गर्नुहोस्। राम्रोसँग निचोरेर माट सासमा चलाउनुहोस्। कभर र थप 10 मिनेट को माध्यम बाट तान्न पकाउनुहोस्।
यो नुस्खाले बाक्लो goulash सिर्जना गर्दछ यदि तपाईं आफ्नो Goulash पातलो हुन चाहनुहुन्छ भने, पानी १ ½ वा २ कपमा बढाउनुहोस्।
क्यालोरिज:3 373,कार्बोहाइड्रेट:चारg,प्रोटिन:। 33g,मोटो:6g,पागलिएको बोसो:दुईg,कोलेस्ट्रॉल:70मिलीग्राम,सोडियम:9 74मिलीग्राम,पोटासियम:१55२मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:एघारg,भिटामिन ए:7575IU,भिटामिन सी:.8 34.मिलीग्राम,क्यालसियम:२मिलीग्राम,फलाम:.3.।मिलीग्राम
कीवर्डअमेरिकी चप सुए, गोमांस गौलाश, क्रक पट, गौलाश, गौलाश रेसिपी, ढिलो कुकर कोर्समुख्य कोर्स, पास्ता पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यो Goulash Recipe
रोटी crumbs र parmesan संग टमाटर